I-Semalt Expert ichaza iWebhu Yokunceda IWebhu Yesixhobo
I-Website eXtractor yenzelwe ukukhuphela i-website yonke ukusetyenziswa kwe-intanethi. Enye yezixhobo ezinobuncedo kwaye zinamandla. Kufuneka ufakele i-URL ofuna ukuyikhuphela idatha, kwaye i-Website eXtractor iya kwenza umsebenzi wayo ngokukhawuleza, ikunike iziphumo ezichanekileyo nezifunayo.
Ukufanelekela abaPhandi, abaThengisi kunye nabaNdaba-ndaba:
I-website eXtractor ayifanele kuphela kubafundi, abashishini bezoqoqosho, abaphathi bezentengiso, kodwa nabo bafanelekile kwiintatheli, abaphandi kunye nabahlalutyi be-equity. Kukho amaxesha apho ufuna ukufikelela kwiwebhusayithi ngelixa ungaxhunyiwe kwi-intanethi, okanye ufuna ukugcina izifayile zakho ezibalulekileyo, kodwa inkampani yakho yokubamba ayinikezeli olu khetho. Ngewebhusayithi eXtractor, kulula ukuyilondoloza iifayile zakho njengoko umxholo wonke ukhutshwa kwi diski yakho kwangoko - servicio de correo electronico gratis. Abaphandi banokulanda iphepha lophando, iincwadi kunye nezinye iinkcukacha kwi-intanethi. Ngokufanayo, abathengisi bezedijithali kunye neentatheli bangayilanda idatha ekukhuliseni amashishini abo.
Ukufikelela kwi-intanethi ye-intanethi ngokukhawuleza:
nge-eXtractor ye-intanethi, unokufikelela kalula kwiwebhu kwaye unokufezekisa imisebenzi ethile. Ezinye iiwebhusayithi neebhulogi azihlali kwi-intanethi ngonaphakade; Ukuba ufuna ukufikelela kwiedata zabo, unokwenza ukuba uyilondoloze iifayile okanye usebenzise i-Website eXtractor. Ukuxhaswa kweefayile kunokuthatha ixesha elininzi kunye namandla. Ngokwahlukileyo, i-Website eXtractor iza kwenza umsebenzi wakho ube lula kwaye uza kukuvumela ukuba ufikelele kwisiza esingaxhunyiwe kwi-intanethi. Kuthetha ukuba unokufikelela kwisiqulatho somntu othile naliphi na ixesha, naphi na.
Iyahambelana neethebhulethi, ii-Smartphones kunye neeComputer zixhobo:
Enye yezinto eziphambili ze-Website eXtractor kukuba iyahambelana nazo zonke iifowuni, ezifana nezixhobo ze-smartphones, izixhobo zekhomputha kunye namacwecwe. Enyanisweni, esi sixhobo sikuvumela ukugcina nayiphi na isayithi kwifowuni yakho yeselula ukuze ikhangelwe ngaphandle. Yintoni eyenza i-Website eXtractor eyahlukileyo kwezinye izicelo ezifanayo kukuba igcina iphepha elipheleleyo kwiziko lakho. Kuthetha ukuba unako ukukhuphela isicatshulwa, imifanekiso, izandi kunye neefayile zevidiyo ngaphandle kwengxaki.
Hambisa Isiqulatho kwiCandelo elikhutshwayo:
Nge-EXtractor yeeWebhsayithi, awukwazi ukukhuphela kuphela indawo yonke kodwa unokuhambisa umxholo wayo kwisistim ekhutshwe njenge floppy disk kunye neCD-ROM. Esi sixhobo sinokukhuphela kwiifayile ezili-100 kwikhompyuter yakho kwimizuzu embalwa. Iyabangela ukuba amaphepha alondolozwe kwisixhobo sakho, kwaye yonke inkqubo ithatha imizuzwana emibini.
Shintsha i-HTML Izixhumanisi:
Nge-EXtractor yeeWebhsayithi, unako ukuguqula izixhumanisi ze-HTML kumagama anqwenelekayo kwaye unokunyusa lakho ishishini. Ungaphinde uhlele isiqhagamshelo se-HTML, okanye wenze ezinye iinguqu nale nkonzo enzulu. Xa isayithi ikhutshwe, iya kugcinwa endaweni yakho kwi disk yakho okanye kwimemori yeselula. Ungasindisa kwakhona iinxalenye zayo kwiziko lewebhu le-EXtractor ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Siyakwazi ukuhamba ngamaphepha alondoloziweyo ngesivinini sombane.
I-eXtractor yeWebhsayithi iza kunye nomsebenzisi-friendly interface kwaye iyahambelana nayo yonke iifayile zokusebenza kunye nezikhangeli zewebhu. Esi sixhobo siza ngeenguqulelo zamahhala kunye ezihlawulelwayo kwaye siqinisekisa ukuba iziphumo eziphezulu kunye nekhwalithi.